DEG DEG: Ra’iisul Wasaaraha oo si rasmi ah ugu dhawaaqay Golihiisa Wasiirada (Liiska wasiirad 2015) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG DEG: Ra’iisul Wasaaraha oo si rasmi ah ugu dhawaaqay Golihiisa Wasiirada (Liiska wasiirad 2015)
12th January 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com- Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arka ayaa caawa saqdii dhexe ku dhawaaqay xubnaha Golihiisa Wasiirada, kadib saacado badan oo la sugayay inuu si rasmi ah u shaaciyo, iyadoo Xukuumadan mar kale la magacaabay xilli saq dhexe, si la mid ah Xukuumadii ka horeysay.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in kadib markii uu garwaaqsaday baahida loo qabo gole xukuumad, isla markaana uu sameeyay wada tashiyo ballaaran oo uu la sameeyay Madaxweynaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka, Xildhibaanada uu soo magacaabay Xukuumad dalka gaarsiisay hiigsiga sanadka 2016.
Mr Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay inuu ka sugayo Baarlamaanka inay ansixiyaan Xukuumada cusub ee uu soo magacaabay, waxaana uu rajo ka muujiyay in Xukuumadiisa ka soo dhalaali doonto waxyaabihii loo igmaday.
Afhayeenka Xukuumada Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa kadib akhriyay magacyada Golaha Wasiirada cusub oo ka kooban 25 Wasiir iyo wasiir kuxigeeno iyo sagaal Wasiiru dowlayaal.
Xubnahan Golaha Wasiirada ayaa waxaa ka dhex muuqda qaar ka mid ah wasiiradii Xukuumadii hore, waxaana intooda ugu badan ee wasiirada, wasiir kuxigeenada iyo Wasiiru dowlayaasha yihiin kuwo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadaba magacyada Golaha Wasiirada waxay kala yihiin sidan:-
25. Abuukar Cabdi Cusman “Mardadi” Wasaaradda Xanaanada
Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa
4. Maxamed Adan “Fargeti” Wasaaradda Arrimaha Dibadda &
Dhimasho & dhaawac ka dhashay shil qabsaday gaari ka baxay Aadan Yabaal kuna jeeday Muqdisho